Zviridzwa murabhoritari zvinofanirwa kucheneswa sei | Xipingzhe
Vashandisi vanofanirwa kunzwisisa kuti kuchengetwa kwechiridzwa uye kugadzirisa ihwohwo hunyanzvi hwekutanga. Nekuda kwekuchengetedza zviridzwa zvakanaka, zvine chekuita neyakaenzana chiyero chechiridzwa, mwero wekushandisa uye nehukuru hwebudiriro yedzidziso yekuyedza, nezvimwewo Naizvozvo, kubvisa guruva nekuchenesa ndizvo zvakakosha zvekugadzirisa zviridzwa.
Iyo guruva rinowanzo diki guruva zvidimbu zvine shoma shoma static magetsi. Kazhinji ichiyangarara mumhepo, ichifamba nemhepo, inonamira kuchinhu pachinosangana nacho, uye inenge isingaoneke. Guruva rakanamatira kune modhi yemuenzaniso rinokanganisa ruvara rwayo, uye guruva pazvikamu zvinofamba zvichawedzera kupfeka. Kana paine guruva pazvinhu zvemagetsi, zvakakomba zvinokonzeresa kupfupika kwedunhu nemagetsi. Kana paine guruva pane akakosha chaiwo ekuridza, iwo akaomarara anoita kuti zviridzwa zvive zvidhoma.
Izvo zvinonyanya kuve kwekuchenesa kwegiraziware. Glassware yakakamurwa kuita general glassware uye yakakosha magirazi. Kune marudzi maviri etsvina akasungirirwa pagiraziware. Imwe mhando inogona kucheneswa nemvura, uye imwe yacho inofanirwa kucheneswa nematanho chaiwo. Mukuyedza, zvisinei kuti ndeipi mhando yevhu yakasungirirwa mugirazi, midziyo yakashandiswa inofanira kucheneswa nekukasira.
Ehezve, kana iwe uchida kuvandudza mashandiro ekuchenesa, dzivirira mhedzisiro pane yekuyedza uye yekuongorora mhedzisiro inokonzerwa nekushaikwa kwehutsanana, uye kudzivirira hutachiona uye huturu hunosvibisa kubva mukukuvadza hutano hweanoshanda, unogona zvakare kusarudza izere- otomatiki rabhoritari glassware waher. Yeyakachengeteka uye inoshanda yekuchenesa michina.
Kunyanya mune yazvino chirwere kudzora uye zvekurapa zvikamu, iyo yekuongorora, kuongorora uye decontamination nzvimbo 'mabasa anokurumidza, akaoma, ane njodzi, uye anorema. Manual kuchenesa pasina mubvunzo kuchawedzera mukana wevashandisi kusangana nehutachiona. Iyo yepamusoro-tembiricha uye yakakwira-alkali yekugezera nharaunda mukamuri yemukati ye laboratori glassware washer inogona denature iyo protein, uye iyo spike protein haigone kunyatso kubatika pamwe neyakagamuchirwa sero, nokudaro ichimisa hutachiona.
XPZ ine nzira dzakasiyana siyana dzekuchenesa, dzinogona kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi; yekumhanya yekumhanyisa inomhanya, iyo inochengetedza zvakanyanya nguva yemutengi. Yekukurumidza kuomesa kumhanya, inopisa mweya yakadzika mweya inopa, ichiponesa 35% nguva pane yechinyakare ovhoni kuomesa. Zvinotonyanya kukosha ndezvokuti 360 ° spray tekinoroji, epamusoro neyezasi pfapfaidzo maoko ane simba rakasimba rekutsvaira uye anowana inogutsa yekuchenesa mhedzisiro.
Post nguva: Chivabvu-26-2020